Review Kem dưỡng ẩm CeraVe có tốt không? Có những loại nào? | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Review Kem dưỡng ẩm CeraVe có tốt không? Có những loại nào? | Muasalebang in Muasalebang
I-Cerave Moisturizing Cream ingenye yezinto zokuthambisa ezaziswa kakhulu futhi ezisetshenziswa imilutha yokunakekela isikhumba. Lo mugqa womkhiqizo unezinhlobo ezi-3 zezinhlobo ezi-3 ezihlukene zesikhumba. Ukuze uqonde kangcono imikhiqizo ye-Cerave cream kanye nendlela yokukhetha imikhiqizo efanele yesikhumba sakho, isihloko esilandelayo sizobukeza ngokuningiliziwe imigqa yomkhiqizo we-Cerave cream. Sikumema ukuba ufunde kanye nawe.
I-CeraVe brand iphephile, i-benig cosmetic brand
1 I-Brand CeraVe
1.1 Imigqa yomkhiqizo eyinhloko yomkhiqizo we-CeraVe
2 Ukubuyekezwa okuningiliziwe kwe-CeraVe moisturizer kuhle?
2.1 Cerave Moisturizing Izithako Key
2.2 Ukuma komkhiqizo nomuzwa ngemva kokusetshenziswa.
2.3 Yiziphi izinhlobo zokhilimu be-Cerave ezikhona?
3 Izibuyekezo Ezingu-3 ezihamba phambili zokuthambisa i-CeraVe namuhla.
3.1 1. I-Cerave Moisturizing Cream – yesikhumba esivamile nesomile.
3.2 2. I-Cerave Moisturizing Lotion for Dry Skin – Facial Moisturizing Lotion AM SPF 30.
3.3 3. I-CeraVe Facial Moisturizing Lotion PM 4% Niacinamide
I-CeraVe Skincare iwuphawu oludumile emkhakheni wokunakekelwa kwesikhumba kanye nemikhiqizo yobuhle ehamba phambili eMelika. Isungulwe ngo-2005, ngaphansi kokubambisana kodokotela besikhumba abaningi abahamba phambili e-US nasemhlabeni. Kuze kube manje, imikhiqizo yomkhiqizo weCerave isimboze imakethe yomhlaba wonke, kubandakanya neVietnam.
Lona futhi uphawu lokuqala lwezimonyo emhlabeni ukusebenzisa ubuchwepheshe obuphambili ukwengeza izithako ezinenzuzo esikhumbeni ezifana nalezi: I-Cholesterol esters, Ceramides, lipids emikhiqizweni yokunakekelwa kwesikhumba, okuletha imiphumela esebenza kahle kakhulu.
Sekuyiminyaka ecishe ibe ngu-20, uhlobo lwezimonyo lwe-CeraVe lucwaningwa futhi lusetshenziswe ochwepheshe nodokotela besikhumba abanobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu, balethe imikhiqizo eyingozi kakhulu nephephile esikhumbeni. I-CeraVe wumkhiqizo wezimonyo ogunyazwe futhi onelungelo lobunikazi yi-Eczema Association – i-American Eczema Association.
Imigqa yomkhiqizo eyinhloko yomkhiqizo we-CeraVe
Njengamanje, i-CeraVe isabalalisa futhi yenza umugqa ogcwele wemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba efana nale: isikhumba sobuso, isikhumba somzimba, isikhumba esibucayi, isikhumba se-eczema, isikhumba esomile, isikhumba se-acne, isikhumba se-allergic, isikhumba se-psoriasis.
Xem Thêm [Review] uống bột cần tây mật ong có tốt không? Tác dụng và cách dùng? 2022 | Muasalebang
Imigqa yomkhiqizo wokunakekelwa kwesikhumba yomkhiqizo we-CeraVe ithole imiklomelo eminingi emkhakheni wokunakekelwa kwesikhumba nobuhle obufana nalokhu:
I-CeraVe . Isihlanzi Sobuso
I-CeraVe . Ukhilimu Onomsoco
I-CeraVe Skin Serum
Iningi lemigqa yemikhiqizo yalo mkhiqizo ithenjiwe futhi ibuyekezwa kahle ngamakhasimende. Umkhiqizo awubangeli ukucasuka kwesikhumba, awusebenzisi amakha okwenziwa futhi awubangeli induna.
Ukubuyekezwa okuningiliziwe kwe-CeraVe moisturizer kuhle?
Cerave Moisturizing Izithako Key
I-Caprylic (Capric Triglyceride)
I-Caprylic yaziwa nangokuthi amafutha e-MCT noma amafutha e-medium chain anguketshezi ngaphansi kwezinga lokushisa. Ingqikithi yawo ingamafutha emvelo kakhukhunathi akhishwe i-lauric acid. Le nto ine-ultra-light texture ye-molecular ekwazi ukungena ngokushesha esikhumbeni futhi ingabangeli izimbotshana ezivalekile zidale induna. Lesi sithako esisebenzayo sinamandla okubulala amagciwane kanye nesikhunta esidala i-seborrheic dermatitis, i-atopic dermatitis, i-psoriasis, njll., okushiya isikhumba sihlanzekile futhi sicwebezela.
I-Niacinamide iwuvithamini B oyinkimbinkimbi esiza ekwandiseni umswakama wesikhumba, ibuyisele amangqamuzana alinyazwe izinduna, i-dermatitis, kanye nokungezwani komzimba nezinto ezithile. Ngaleyo ndlela kusiza ukukhanyisa isikhumba nokunciphisa i-hyperpigmentation. Ngaphezu kwalokho, isithako esisebenzayo i-Niacinamide singasiza ekwandiseni ukukhiqizwa kwe-collagen, ukulwa nokuguga kanye ne-antibacterial enhle esikhumbeni esithandwa yizinduna.
I-Ceramide 3, i-Ceramide 6-II, i-Ceramide 1 ne-Cholesterol
Lena i-trio ye-combos eyenza isithiyo sesikhumba, igcine umswakama futhi inikeze umswakama omuhle esikhumbeni. Ifomula ene-ceramides eyengeziwe kanye ne-cholesterol isebenza njengomshini wokulungisa umonakalo wesithiyo sokuzivikela, ukuvimbela ukulahlekelwa kwamanzi ngesikhumba esingaphansi kwe-epidermal, okwenza isikhumba sibe namanzi kangcono.
I-Hyaluronic acid ibhekwa njengekhandidethi elisindayo lokunakekelwa kwesikhumba kanye ne-hydration. Lesi sithako esisebenzayo sinamandla amanzi aphindwe izikhathi eziyi-1000 isisindo sawo. Kunjengotshani obukhulu obumunca amanzi endaweni ezungezile kanye nongqimba olungezansi lwesikhumba ukuze lugcwalise futhi lupholise izilonda nezimbobo esikhumbeni. Iphinde inciphise ukubukeka kwemigqa emihle nemibimbi, ikunike isikhumba esicwebezelayo, sobusha.
Lesi sithako esisebenzayo sisebenza ebusweni besikhumba njenge-emollient kanye ne-hider. Lesi sithako sibekezelelwa ezinhlotsheni eziningi zesikhumba, okuhlanganisa isikhumba esibucayi, esibuthakathaka noma esinezinduna. Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukuvimbela ukulahlekelwa kwamanzi ngokusebenzisa i-epidermis ukusiza ubuso besikhumba bushelelezi futhi bugcine umswakama kangcono.
Xem Thêm [Review] TOP 12 sữa rửa mặt trị mụn đầu đen xuất sắc nhất | Muasalebang
Izithako I-Polyglyceryl-3-Diisostearate kanye ne-Cetearyl Alcohol – ngokusho kwe-CosDNA Cosmetics Encyclopedia, lezi zithako ezimbili ezisebenzayo zinamandla okuvala ama-pores futhi zingabangela izinduna. Nokho, lokho kumane kuyizincomo, kodwa ngokwami, ngikusebenzisile, kodwa ngibone umphumela ophambene. Ngakho-ke, ukuze ubone ukuthi isikhumba sakho sifanelekile noma cha, udinga ukwenza ukuhlolwa okusheshayo ngaphambi kokusetshenziswa.
Ukhilimu we-CeraVe unomumo okhanyayo, umunca kalula ukuze ulethe isikhumba esibushelelezi, esimhlophe esikhanyayo kumsebenzisi.
Ukuma komkhiqizo nomuzwa ngemva kokusetshenziswa.
Ukuthungwa kwe-Cerave moisturizer kunokhilimu, nokuvumelana okufana nejeli, kodwa kuwukhilimu obushelelezi, obisi okulula ukusabalala futhi amunce ngokushesha, okunikeza umuzwa okhanyayo ngemva kokufakwa ebusweni.
Nge-CeraVe moisturizer, ngemva kokugeza ubuso bakho nokusebenzisa i-toner, thatha inani elincane futhi uligcobe esikhumbeni sakho. Umbono wokuqala ukuthi ukhilimu uthatha ngokushesha, hhayi omanzi. Ngemva kokugcoba ngokulinganayo ebusweni bonke, uzothola isikhumba sakho sithambile, sibushelelezi, uzwa sengathi isikhumba sakho sisanda kwakhiwa ifilimu encane ukuze uvimbele umhwamuko wamanzi esikhumbeni. Iphunga likakhilimu we-CeraVe lingokwemvelo, alinamandla njengeminye imikhiqizo ethambisayo.
Yiziphi izinhlobo zokhilimu be-Cerave ezikhona?
Njengamanje, emakethe, i-CeraVe moisturizing cream iyakhiqiza futhi ihlukanise imigqa emi-5 yemikhiqizo efanele uhlobo ngalunye lwesikhumba ngale ndlela elandelayo:
I-Cerave Moisturizing Cream: I-lotion e-creamy yesikhumba esivamile ukuya esomile.
I-Cerave Facial Moisturizing Lotion AM SPF 30: ukhilimu wosuku osuselwa ku-lotion wesikhumba esomile
I-Cerave Facial Moisturizing PM Niacinamide: I-moisturizer yasebusuku yenhlanganisela nesikhumba esinamafutha.
I-Skin Renewing Night Ccream: i-moisturizer elwa nokuguga ebusuku.
I-Healing Oint: I-lotion ethambisayo ethambisa futhi idambise isikhumba esicasukile, esibomvu, nesilumayo.
Kodwa-ke, emakethe yaseVietnam, imigqa yomkhiqizo emithathu ephezulu kuphela edumile, futhi imikhiqizo emibili engezansi ibonakala kakhulu noma ayivamile ukubonakala. Ngakho-ke, kulesi sihloko, ngithanda ukubukeza okwengeziwe mayelana nemikhiqizo emithathu edumile yalolu hlobo
Izibuyekezo Ezingu-3 ezihamba phambili zokuthambisa i-CeraVe namuhla.
1. I-Cerave Moisturizing Cream – yesikhumba esivamile nesomile.
Lo mkhiqizo ufanelekile kulabo abanesikhumba esivamile esomile. Ngokuthungwa okukhilimu, okunamathela kancane, iyakwazi ukumunca ngokushesha esikhumbeni ngemva kokufaka isicelo. Iphunga likakhilimu alinamandla, kodwa kunalokho lilula futhi limnandi.
Izithako ezimbili ezigqame kakhulu uma kuziwa ku-CeraVe Moisturizing Cream i-Ceramide ne-Hyaluronic Acid, i-duo enomsebenzi wokuthambisa nokugcina umswakama ophezulu wesikhumba: I-Hyaluronic Acid ifana nefaneli edonsa amanzi emoyeni ezindebeni. , eletha umusi wamanzi esikhumbeni. I-Ceramide ifaniswa ne-“dermatologist” ekhuthele ukuphulukisa ukulimala kwesikhumba, ukusiza ukubuyisela nokuqinisa ulwelwesi olungaphansi, ukubuyisela impi ye-intracellular ukuletha isikhumba esinempilo, esibushelelezi futhi sigcwele impilo.
Kimina, lokhu kuwumcebo hhayi kuphela ezinsukwini zasebusika ezomile kodwa futhi nezinsuku ezishisayo zasehlobo. Ikhono elihle lokuthambisa kufanele linciphise ukuchitheka kukawoyela, ngaleyo ndlela kuqede izinkinga zesikhumba. Ngokuqondile, le moisturizer ingasetshenziselwa isikhumba esingavuthiwe sezingane noma isikhumba esibuthakathaka ngenxa ye-eczema, i-psoriasis ngenxa yekhwalithi yayo enempilo futhi ephephile eye yacwaningwa futhi yasetshenziswa ochwepheshe.
I-moisturizer enhle, ifanele isikhumba esomile, isikhumba esivamile
Isithako sinezici eziningi kanye nokusetshenziswa okuhle kwesikhumba.
Iphephile, ilungile, ayicasuli
Intengo eshibhile ifanele abantu abaningi
Isikhumba esinamafutha okufanele sicatshangelwe
2. I-Cerave Moisturizing Lotion for Dry Skin – Facial Moisturizing Lotion AM SPF 30.
I-Cerave Facial Moisturizing Lotion AM SPF 30 ilungele ukusetshenziswa kwansuku zonke kanye nesikhumba esomile. Ukhilimu unokuthungwa kwe-lotion ye-liquid, kulula ukuyithatha uma ifakwe esikhumbeni, hhayi i-greasy, ayivali ama-pores. Iphunga elilula, umuzwa omnandi lapho usetshenziswa.
Isici esigqame kakhulu kulo khilimu ukuthi uqukethe i-trace zinc oxide ehlanganiswe nezithako ezisebenzayo iHomosalate, Octinoxate ne-Octocrylene, ekwazi ukuphambukisa imisebe ye-UVA ne-UVB elangeni kanye neminye imithombo yemisebe ye-UV, isiza Ukuvikela isikhumba ezingozini. ama-agent, okwenza kube mnyama, ukoma kanye ne-pigmentation.
Ifomula enothe ngezithako ezisebenzayo I-Ceramide iyisithako esakha umgoqo oqinile wokuvikela isikhumba, elapha umonakalo esikhumbeni futhi ibuyisele ungqimba lwe-lipid ngaphandle kwe-epidermis ukuze isikhumba sigcwale ubungqabavu.
Umkhiqizo usetshenziswa ngobuchwepheshe bokulethwa kwe-MVE obuhlukile obuhlanganiswe nobuchwepheshe be-Multi Veslass ukusiza ukukhulula nokulawula izithako ezondla amangqamuzana esikhumba, okuvumela izithako ukuthi zingene zijule esikhunjeni ukuze zondleke kanye nokuvikela isikhumba.
I-Cerave Moisturizing Lotion eyesikhumba esomile nesivamile. Ukhilimu wosuku olusebenzayo nophephile lokuvikela ilanga oshiya isikhumba sithambile, simanzi, silingana futhi sigqamile. Ngakho ungasebenzisa i-Cerave Moisturizing Lotion phakathi nosuku ngaphandle kosizo lwe-sunscreen.
Ukuthungwa okukhanyayo, ukumunca kalula
Izinga eliphezulu lomswakama elinokuvikela okuhle elangeni
Isebenza kahle ekusetshenzisweni kwansuku zonke nasesikhumbeni esomile
Isiza ukondla nokubuyisela amaseli esikhumba
Idizayini yokufutha, elula ngomthamo omkhulu.
Ukukhanya, iphunga elimnandi
Ukuvikela ilanga ngempumelelo kakhulu
Ayifanele ukusetshenziswa ebusuku
3. I-CeraVe Facial Moisturizing Lotion PM 4% Niacinamide
I-Cerave Niacinamide Moisturizing Cream ithathwa njengomkhiqizo wangempela wesikhumba esinamafutha, esithandwa yizinduna, isikhumba esibucayi. Ngezithako I-Ceramide 3 + 6-II + 11 kanye ne-cholesterol kanye ne-Niacinamide ayibangeli izinduna, ayibangeli ukungezwani komzimba nezinto ezithile kodwa futhi ithambisa futhi ivikele isikhumba. Ngakho-ke, lo mkhiqizo ohlale uthenjwa yi-dermatologists.
Isithako esisebenzayo i-Niacinamide sinokuqeda ukuvuvukala, i-antibacterial, ikhanyisa isikhumba, futhi ibamba iqhaza ohlelweni lokubuyisela kanye nokwenza kabusha ukulimala kwesikhumba.
Izithako ziqukethe i-Ceramide 3, i-Ceramide 6-II, i-Ceramide 11 ehlanganiswe ne-Este ekhishwe kumafutha kakhukhunathi ukusiza ukugcina umgoqo wokudala umgoqo ovikelayo we-epidermis ngaphansi kwesikhumba, okwenza isikhumba sigcwale ngokugcina amanzi.
Ngaphezu kwalokho, isithako sibuye sengeze izithako ezisebenzayo zokuthambisa ezifana ne-Glycerin noma i-Hyaluronic Acid. Abasizi ababili abaphumelelayo baletha umswakama omuhle esikhumbeni.
Umkhiqizo ulungile ngokuphelele, awuqukethe iphunga elimnandi noma utshwala, izivimbelakuvunda, ngakho-ke ufanelekile esikhumbeni esibucayi, isikhumba esibuthakathaka, ukuxebuka, isikhumba esiqhekekile.
Umuzwa wangempela uma usebenzisa
Le moisturizer ye-Cerave PM Niacinamide inokuthungwa okuyingxube ephakathi kwesithambiso nesikhilimu, engeyona ugqinsi kakhulu noma engawuketshezi kakhulu futhi inombala opaque omhlophe. Umkhiqizo awunawo amakha, kodwa usengakwazi ukuzwa iphunga, kodwa uthambile futhi uphela ngokushesha. Uma isetshenziswa esikhumbeni, ukhilimu udonswa ngokushesha kakhulu futhi unomphumela opholile ngokushesha. Ngemva kokuskena, uzozwa sengathi kunongqimba oluncane lobumanzi obushelelezi kodwa olungakhululekile. Nakuba kuwumkhiqizo wasebusuku, ngisawusebenzisa nasemini.
Ngishintshele kulo mkhiqizo ngoba ngithenge isikhumba esiningi esizungeze isilevu sami nasemlonyeni esasixebuka kaningi, ukufaka nje isikrini sokuvikela ilanga kwenza isikhumba sami sikhunte futhi singakhululeki. Kufanele ushintshe ukuze uzame le ngane ngoba kunezibuyekezo eziningi ezinhle. Ngemuva kwamaviki ama-2 wokusetshenziswa, isimo sesikhumba esicwecwayo asisekho, isikhumba sihlala simanzi ngokwanele, sibushelelezi kodwa asikhululekile ukunamathela. Umkhiqizo uqukethe i-Niacinamide kodwa ukugxila kuphansi futhi ngiwuthenge ngenjongo yokuwuthambisa, ngakho angizange ngilindele okuningi. Ngamafuphi, le ntombazane ingaphezu kwe-moisturizer, futhi ayikwazi ukwenza isikhumba sayo sibe mhlophe
Izinzuzo ze-Cerave moisturizer I-4% ye-Niacinamide
Izakhiwo ezinhle zokulwa nokuvuvukala kanye ne-antibacterial
Ukuswakama, ukululama kahle kwesikhumba
Imuncwa kalula, ifanele isikhumba esinamafutha, esihlangene
Umkhiqizo ulungile, awulimazi isikhumba, awubangeli ukucasuka
Iphephile futhi ilungile ngisho nasesikhumbeni esibucayi
Idizayini ehlakaniphile, elula ukuyisebenzisa
Imikhiqizo ithatha isikhathi eside ukubona imiphumela.
Ngenhla kukhona amasheya mayelana nemikhiqizo ye-CeraVe moisturizing cream. Ngethemba, ngalesi sihloko, uzoba nolwazi oluthe xaxa mayelana nokunakekelwa kwesikhumba kanye nokukhetha imikhiqizo efanele isikhumba sakho. Ukufisa njalo umuhle.
Cách huỷ gia hạn dung lượng iCloud trên iPhone, iPad, Mac | Muasalebang